Chelsea Oo Dalab Ka Gudbineysa Haaland, Xaalada Messi Iyo Barcelona Oo Meel Qaraar Mareysa & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa – Garsoore Sports
Chelsea Oo Dalab…
Chelsea Oo Dalab Ka Gudbineysa Haaland, Xaalada Messi Iyo Barcelona Oo Meel Qaraar Mareysa & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa
Asc, maalin wanaagsan aqriste. daaqada Suuqa kala iibsiga cayaartooyda ma furna xilligan, kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa suuqii bishii Janaayo aynu soo dhaafnay, balse kuma xirna kooxuhu inay sugaan suuqa xagaaga si ay saxiixyo u sameeyaan balse waxay lasii xiriirayaan bartilmaameedyadooda xagaaga iyagoo qaarkood heshiisyo lasii gaaraya cayaartooyda si ay durbaba ula saxiixdaan xagaaga. haddaba waxaan innaguna idiin soo gudbineynaa wararkii ugu dambeeyay ee Suuqa.
Guddoomiyaha kooxda Tottenham Daniel Levy ayaa doonaya inuu suggo ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkaan kahor inta uusan go’aansan mustaqbalka Jose Mourinho ee leylinta kooxda. (ESPN)
Weeraryahanka reer Argentina Sergio Aguero, oo 32 jir ah, ayaa qirtay inuusan wax fikrad ah ka heynin in xilli ciyaareedkan uu noqon doono kiisii ugu dambeeyay ee uu u ciyaaro Manchester City. (Times)
Kubbadsameeyaha Barcelona iyo Argentina Lionel Messi, oo 33 jir ah, ma uusan go’aansan halka uu ka ciyaari doono xilli ciyaareedka soo aadan, wakiilkiisana weli wax wadahadal ah lama uusan gelin kooxaha kale. (ESPN)
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa xaqiijiyay inuu wadahadal la yeelan doono weeraryahanka reer Uruguay Edinson Cavani oo ku saabsan heshiis kordhintiisa Manchester United. (Sky Sports)
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa doonaya garabka Mareykanka u dhashay ee Christian Pulisic uu kusii nagaadiyo garoonka Stamford Bridge, laakiin wuxuu sheegay inaan wax go’aan ah laga gaarin sida la yeelayo xagaaga. (Evening Standard, London)
Tuchel ayaa ku adkeysanaya inay tahay “goor dhaqso ah” in go’aan laga gaaro mustaqbalka weeraryahan Olivier Giroud inkasta oo 34 jirkan reer France uu galayo bilihii ugu dambeeyay ee heshiiskiisa Chelsea. (Mirror)
Goolhayaha reer Spain ee kooxda Chelsea Kepa Arrizabalaga ayaa sheegay inuusan marnaba ku fikirin inuu ka tago kooxda, islamarkaana uu diyaar u yahay dagaalka loogu jiro booska dooqa koowaad ee goolhayaha kooxda. (Star)
Kooxda Borussia Dortmund ayaa doorbideysa inay iska iibiso weeraryahanka reer England Jadon Sancho iyadoo sidoo kale qorsheyneysa inay kooxda kusii negaadiso weeraryahanka reer Norway Erling Braut Haaland xagaaga. (Bild)
Kooxda Chelsea ayaa kamid ah kooxaha xiiseeynaya Haaland iyagoo diyaar u ah dalab 135 Milyan oo Yuuro ah inay ka gudbiyaan marka suuqa uu furmo xagaaga (Football.London)
Tababaraha Aston Villa Dean Smith ayaa meesha ka saaray wararka xanta ah ee la xiriirinaya daafaca reer England Ezri Konsa, oo 23 jir ah, kaasoo lala xiriirinayo kooxaha Liverpool iyo Tottenham. (Birmingham Mail)
Goolhayaha reer Talyaani ee AC Milan Gianluigi Donnarumma ayaa doonaya inuu noqdo goolhayaha ugu mushaarka badan adduunka. Qandaraaskiisa haatan wuxuu dhacayaa dhammaadka xilli ciyaareedkan waxaana xiiseynaya kooxaha PSG iyo Chelsea. (90min)
Kooxda Huddersfield ayaa xaqiijisay inay ka fiirsaneyso inay si xor ah kula soo saxiixato laacibkii hore ee qadka dhexe West Ham Ravel Morrison. 28 jirkaan reer England ayaa haatan raadinaya kooxdiisii ​​12aad kaddib markii uu ka tagay kooxda reer Holland ee ADO Den Haag bishii Janaayo. (The Sun)
Wiil uu dhalay daaficii hore ee Everton iyo xulka England Phil Jagielka ayaa u saxiixay kooxda ka dhisan gobolka Merseyside ee Liverpool. (Mail)
Gabriel Martinelli Oo Farriin U Diray Tababare Arteta Isagoo Sidoo Kale Sheegay Laacibka Uu Ku Daydo